Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo saakay dib ugu soo laabtay Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo saakay dib ugu soo laabtay Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa saakay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa oo ka qeyb galay shirkii lagu qabtay magaalada London ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin isugu jiray wasiiro, xildhibaano katirsan labada Aqal iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Shirka London ka dhacay ayaa waxaa soo qaban qaabisay dowladda Ingiriiska, waxaana ka qeyb galay in ka badan 50 dowladood oo danneeya arrimaha Soomaaliya, waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid ahaayeen ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bani’aadanimada iyo qodoba kale oo aad u badan.
Madaxweyne Farmaajo oo si kooban uga hadlay shirkaasi ka dhacay magaalada London ayaa sheegay inuu guul kusoo dhamaaday, isagoona dhinac kale tilmaamay in dowladiisa ay ka shaqeeneyso dhisidda ciidan qaran oo difaaca dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa ka qeyb-galay shir ka dhacay magaalada London oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. waxaana shirkaasi laga soo saaray dhowr qodob oo aad muhiim ugu ah Soomaaliya, balse aan la ogeyn sida qodobadaasi loo dhaqan gelin doonno.